Home Wararka Dagaalka Farmaajo iyo xaraashka shidaalka Galmudug/Jubbaland maxaa ka dhaxeeya? (Warbixin Xassaasi ah)
Dagaalka Farmaajo iyo xaraashka shidaalka Galmudug/Jubbaland maxaa ka dhaxeeya? (Warbixin Xassaasi ah)
Shirkii maanta lagu soo gaba-gabeeyay maagalada London ee lagu xaraashayay shidaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in 12 ceel oo ku yaala Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland si horumaris ah loo bixiyay oo la siiyay shirkadda baaritaanka soo samaaysay oo loo xilsaaray xaraashka shidaalka Soomaaliya.
Mar la waydiiyay mid ka mida madaxda shirkadaha maanta ku sugnaa goobta shirka ee London “in shacabka ku dhaqan deegaanada Galmudug iyo Jubbaland lagala tashaday biixinta 12ka ceel ee ku yaalo degaanadooda” ayaa sheegay in ayan arintaas ayaga qusaynin. Waxa uu yiri “dowladda Soomaaliya ayaa noo sheegtay in ay maamulka iyo shacabka ku dhaqan deeganadaas gacanta ku hayaan wax dhib ahna ayan uga imaan donin”.
#SomaliaForSale As per the agreement, SomaOil is awarded automatically six blocks in #Galmudug & six blocks in #Jubbaland, 60K square KM. In addition, 206 oil and gas blocks are being auctioned without proper consultation with relevant stakeholders.#Somalia #Africa #Corruption
— Fadumo Dayib (@fqdayib) February 5, 2019
Hadbana yaa lagala tashaday in dhulka ay ku dhaqan yihiin dadkaas la siiyo shirkado shisheeye in ay ka macaashaan.
Waxaa hadaba muuqato in dagaalka uu MW Farmaajo ku qaaday madaxada iyo shacabka Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland ay la xiriirto in uu degaanadaas gacanta ku dhigo una magacaabo madaxweynayaal maqaar saar ah ee uu isagu keensaday si qeyraadkaas ku jira deeganadaas uu isaga iyo kooxdiisa calool u shaqeeystayaasha ay ula wareegaan.
Daud Cilmi Nure ee ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa yiri “Farmaajo waxa uu doonayaa in dhaco shidaalka ku jira deegaankeena isla markaana lacagta ka soo baxdo dhacaas uu u istcimaalo in uu anaga naga gumaado”. Waxa uu intaas ku daray “walaahi baan ku dhaartay in uusan nabad ugu raaxaysan doonin lacagta laga helo shidaalka deegaankeena…. waa in uu ogaadaa in Goboladda Dhexe yaalaan taangiyo shacab leeyahay waana aan la soo bixi doonaa”.
Ra’iisal Wasaare Xassan Kheyre ayaa u sheegay madaxada Shirkada SOMA OIL ee uu isagu saamiga ku leeyahay in dadka ku nool deeganka Galmudug ayan soo gaari karin ceelesha bada ku yaala ee la qodi doono”. waxa uu intaas ku daray “wax ay ka qaadi karaan ma jirto oo awoodaas ma jirto, dowladdana gacan aday ayaa ay ku qaban doontaa deeganadaas”.
Waxa muuqata in RW Kheyre uusan aqoon ulahaynin dadka ku dhaqan deeganada Jubbaland iyo Galmudug. Waa deegano aad u yaqaano qaabka ay u shaqeeyaan maraakiibta marta badda deegaanadooda waana meeshii uu ka bilaawday waxa lagu yiraahdo afka qalaad “Pirites” ama burcad badeed.
Waxaan shaki ku jirin in dagaalo sokeeye ay keeni doonto boobka iyo xaraashka Shidaalka Soomaaliya. Fakarka Farmaajo oo ku doonayo in uu sida ugu dhaqsiyaha badan leh madax uu isaga leeyahay u dhiibto deeganada Jubbaland iyo Galmudug ma shaqayn doonto waxa ayna ku dhaamaan doonaa fashil. Shidaalka ku jiro Jubbaland iyo Galmudug ma aha mid xoog lagu qaadan karo balse waa mid u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed oo ku nool dalka oo dhan iyada oo la wada leeyahay, si gaar ahba ha u lahaadeen dadka ku dhaqan deeganadaas
Sida kaliya ee looga faa’iideysan karo shidaalka ku jira dhulka hoostiisa waa iyada oo shacabka Soomaaliyeed dib u heshiisiin buuxda loo sameeyo, qalbigoodana la isku furo markaas ayaa wax lawada leeyahay la wada qaybsan karaa.